Guddoomiye Tarsan oo kormeeray qeybo ka mid ah dagmooyinka G/banaadir
Guddoomiyaha Gobalka Banaadir ahna Duqa magaalada Muqdisho oo ay wehliyaan Qaar ka mid ah ku xigeenada Gobalka ayaa maanta kormeeyay dagmooyin ka tirsan gobalka iyagoo u kuurgalayay xalaadaha amaanka, Nadaafadda iyo Dayactirka Waddooyinka.
Kormeerkan shaqo oo ay maanta ku tageen masuulintii ugu sareysa gobalka Banaadir ayaa eheyd u kuurgalida bilicda iyo nadaafada dagmooyinka gobalka Banaadir.
Duqa magaalada Muqdisho oo saxaafadda kula hadlay xaafadda Sanco ee dagmada Yaaqshiid ayaa balan qaaday in dayactir balaaran lagu sameeyay wadooyinka magaalada Muqdisho haatane ay socdaan.
Sidoo kale guddoomiyaha iyo ku xigeenadiisa oo ay wehliyaan qaar ka mid ah gudoomiyeyaasha dagmooyinka ayaa soo kormeeray dagmada Hodan halkaas oo ay ka socotay olole nadaafadeed iyo burburinta dhismayaasha sharcidarada ah ee ka dhisnaa dagmadaasi.
Kormeerkan maanta ay ku tageen mas’uuliyiinta gobolka Banaadir qaar ka mid ah dagmooyinka gobolka ayaa ah u kuurgalida xaaladaha dagmooyinka gobolka waxaana guddoomiyaha iyo mas’uuliyiintii la socotay dagmooyinkii ay booqdeen ka mid ahaa Yaaqshiid, Hodan, Warta nabada iyo dagmooyin kale.